I-Fibromyalgia -Ubuhlungu beNhlungu - iphepha 11 le-11
Ugcino loDidi: Fibromyalgia
I-Fibromyalgia sisifo esinganyangekiyo seentlungu esibonelela ngesiseko seempawu ezahlukeneyo kunye neempawu zeklinikhi. Apha unokufunda ngakumbi malunga namanqaku awahlukeneyo esiwabhalileyo malunga nesifo esinganyangekiyo se-fibromyalgia- kwaye ubuncinci ukuba loluphi uhlobo lonyango kunye namanyathelo okuzenzela afumanekayo kwesi sifo.
I-Fibromyalgia ikwabizwa ngokuba yi-rheumatism yezicubu ezithambileyo. Le meko inokubandakanya iimpawu ezifana nentlungu engapheliyo kwezihlunu nakumalungu, ukudinwa kunye nokudakumba.
I-LDN (idosi ephantsi naltrexone) kunyango lwe-fibromyalgia
20 / 11 / 2015 /0 Amazwana/i udinwe/av ubuhlungu
Ibango lokuba i-LDN (i-Nedrexone ephantsi) iphakamisa amanqanaba e-endorphin kwaye ke kunciphise inani leemeko ezingapheliyo. Oku kubandakanya i-fibromyalgia, i-ME / CFS kunye neempawu zokukhathala okungapheliyo. Kodwa isebenza njani?
Yintoni i-LDN (i-Naltrexone ephantsi yedosi ephantsi)?
Idosi ephantsi ye-naltrexone (LDN) sisiyobisi esikwiidosi ezisezantsi (i-3-4,5mg / imini) iibhloko zezinto ezinjenge-morphine. Kwiidosi eziphezulu, i-naltrexone isetyenziselwa ukuyeka iziyobisi kunyango lotywala kunye nokuxhomekeka kwe-opioid. I-LDN kuthiwa iyanceda ekulweni izifo zesisu, iimeko ezizimele njenge-multiple sclerosis (MS) kunye nemeko ye-rheumatic udinwe - kunye nezinye iimeko ezinje ngeME kunye nesifo esingakhathali esinganyangekiyo.
Isebenza njani iLDN?
I-Naltrexone sisichasi esibophelela kwii-opioid receptors kwiiseli. Ithiyori, i-LDN ixeshana ithintela ukubanjwa kwengqondo kwe-endorphin. I-endorphins kukunyanzela iintlungu emzimbeni kwaye ziveliswa yingqondo uqobo. Oku kunokubangela oko Ingqondo iyahambelana ngokwandisa imveliso yayo ye-endorphin. Isiphumo senqanaba le-endorphin elonyukayo elinokunciphisa iintlungu kwaye landise imvakalelo yokuba sempilweni. Ukunyuka kwemveliso ye-endorphins kunganceda ngokuchasene nentlungu, ispasm, ukukhathala, ukuphinda ubuye kunye nezinye iimpawu, kodwa indlela yokusebenza kunye neziphumo zokugqibela zihlala zibonisiwe.
Iziphumo eziqinisekisiweyo kunyango lweziyobisi ze-opioid
I-Naltrexone iya kuphikisana nemiphumela ye-heroin (eyakhelwe kwi-morphine) kwaye ine zibonakalise ziluncedo ekunciphiseni umlutha we-opioid. Iiarhente zikarhulumente ezifana ne-US Food and Drug Administration (FDA) zivume ukusetyenziswa kwe-naltrexone kunyango lokuxhomekeka kwe-opioid engapheliyo kunye nokusetyenziswa kweziyobisi.
Yintoni omele uyazi nge-LDN (I-Dose Naltroxen ephantsi):
-I-LDN iyakwazi ukurhoxisa isiphumo seepilisi zentlungu
-I-LDN kufuneka imiselwe ngugqirha kwifom eyahlukileyo kuba akukho siyobisi sibhalisiweyo eNorway
-Ithamo lemihla ngemihla elicetyiswayo yi-3-4,5 mg ethathwa phakathi kwe-21.00 kunye ne-03.00 ebusuku, enxulumene nomjikelo womzimba we-endorphin
-I-LDN ayibhalanga ziphumo zokucinezela isifo ngokuchasene nezifo zamathambo
La mayeza akufuneki ukuba athathwe nge-LDN (ngokweftrrotrust):
Yenziwa yasebenza Codeine Cough Isiraphu ®
I-Aspirin kunye neCodeine
I-Astramorph PF ®
Isisombululo esiyi-capital kunye ne-Codeine Oral Solution
Ikhowudi ye-PH ®
I-Dimetane-DC Cough Syrup ®
Ukuhlala ixesha elide ®
I-Emprin ene-Codeine ®
I-Fioricet ineCodeine ®
Fiorinal kunye neCodeine ®
AD Imidium ®
I-infantol Pink ®
IKaodene kunye neParegoric ®
I-Novahistine DH ®
I-Phenaphen ene-Codeine ®
IPhenergan kunye neCodeine ®
IPhenergan VC ®
Promethazine VC kunye neCodeine
I-Remicade-kufuneka icinywe iintsuku ezingama-50
Irobitussin AC ®
I-Robitussin DAC ®
Coma kunye neCodeine
Umvavanyi ongumvavanyi ngeCodeine ®
Phakathi kwe-SF ®
Funda: D-Ribose kunyango lwe-fibromyalgia, ME / CFS kunye nokudinwa okungapheliyo?
Ipapashwe ngo-20.11.2015 - Vondt.net
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/LDN-Kjemisk-format.jpg?media=1648573622 568 675 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2015-11-20 22:15:402019-06-29 17:39:17I-LDN (idosi ephantsi naltrexone) kunyango lwe-fibromyalgia
Iphepha loku-11 lama-11«<91011